Mid ka mid ah waxyaabaha ugu weyn ee ku saabsan Windows Phone 8, marka la barbar dhigo telefoonada iPhone iyo Android, waa in ay tahay shakhsi oo gaar ah si aad u. Haddii aad ku cusub tahay Windows Phone 8, ka fiirsaneysa in ay soo iibsato hal ama weli n unug aad soo iibsatay in muddo ah, kuwaas oo 15 Talooyin iyo tabaha ku tusi doona sida aad u beddesho kartaa Windows Phone 8 in ay wax soo saar badan. Optimising wax soo saarka aad telefoonka ee waxay ka dhigan tahay in aad yeelan doonaan waqti dheeraad ah oo ku caaradda farahaaga, waayo, waxyaalaha ka badan!
1 Customise Your Start Screen
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aad ku kordhin kartaa wax soo saarka aad Windows Phone 8 waa in la shakhsiyeeyo aad Start Screen. Abaabul biinanka aad si aad u isticmaali lahayd maalintii oo dhan. Halkan waxaa ah sidii aan u samayn, barnaamijyadooda aan aadka u isticmaalno yihiin iskula dhexe halkaas oo ay si fudud gaaray la suulka. Intaa waxaa dheer, in aad la shakhsiyeeyo kartaa Screen Smart si uu u eego habka aad rabto in sida la mawduucyada Fundka, soo jeeda pre-ku rakiban ama sawiro ka yimid oo duudduuban camera, Facebook ama kaydinta daruur jeeda Settings> bilow + Mawduuca.
2 bar Cortana
Thanks to ay buug degaanka-ku kaydsan telefoonka, Cortana awoodo si aad u barato oo ku saabsan si dhakhso ah - waxa ka mid ah sirdoonka macmal kaaliyayaasha shakhsi ugu fiican samaynta. Intaa waxaa dheer in ay xogta u jiidayo ka dabeecadda isticmaalka telefoonka, waxaad ku dari kartaa ama ka saarto warbixin gacanta si kor loogu qaado waxtarka ay iyo ammaanka. In sidaa la yeelo, guji Cortana ka dibna tubbada saddex ulood oo siman on geeska midig ee sare si ay u helaan ay qor halka aad ku dari kartaa ama ka saarto warbixin iyo edit goobaha aad.
3 Ka faa`iidaysiga Word Flow
Windows Phone 8 ayaa Word Flow dhisay u galay. Iyadoo habkaani, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa dhexsocoto farahaaga guud ahaan xarfaha oo kor marka aad dhamaysid - tani laga yaabaa in ka dhigi lahaa erayo aad "nooca" dhakhso badan oo si sax ah. Waxa kale oo ay geli doonaan meel si toos ah ka dib marka aad kor u farahaaga iyo balaariso magac ku habboon sida "Big Ben" iyo "New York". Sida aad u isticmaalaan, Word Flow noqon doonaa xariifnimo sidaa sameeyaan isticmaali habkaani sida ugu badan ee aad awoodo.
4 Customise Centre Your Action
Weerar dadban ku hoos Xarunta Action iyo u aragto haddii ay ka shaqaynayso aad u. Haddii aadan, u tag Settings> Notifications + Tallaabooyinka in la beddelo afar tuuryo inuu ciyaaro barnaamijyadooda ugu isticmaalay. Waxa kale oo aad ka beddeli kartaa dhaqanka qaylodhaan calan iyo farriimaha aad.
5 Guddi Saacadaha Deggan
Iyada oo siyaabo weyn in ay ku xidhmaan qoyska iyo saaxiibada, waxaan nahay dambi ah la isku qasin, kuwaas oo markii laba dhan. Iyadoo kaaliyaha shakhsi caqli badan Microsoft ee, Cortana, waxaad awoodi doontaa inaad si uu asagu wacay iyo qoraalka inta lagu guda jiro muddo cayiman. Sidaas haddii aad waqti ula kuwa aad jeceshahay, ganaax-ka qabi karto in bandhig ganacsi oo muhiim ah ama guriga uu ka soo kabsaday hargab, Cortana sii dayn doonaa inaad haysato waqti igmaday inay mar kasta oo aad rabto. In sidaa la yeelo, u tag Settings> Saacadaha Deggan. Waxa kale oo aad astaysto "xeerarka horumar degdeg ah" oo loogu talagalay dadka qaar in ay awoodaan in aad la xidhiidhi inta lagu jiro waqtigan.
6 Camera Default App oo Photos kaabta toos ah
Haddii aad u dhif ah isticmaasho Windows Phone 8 ee default app camera, in wax laga beddelo si app aad dooratay in Settings> Codsiyada> Sawirrada + Camera in la baabi'iyo toggling u dhexeeya laba barnaamijyadooda camera. Inta aad u joogay, oo aad si toos ah telefoon gurmad kuwaas oo sawiro iyo videos in kaydinta daruur. Haddii aad ka welwelsan tahay isticmaalka xogta, aad habkaani dami karaa ama u xaddido in ay marka WiFi waa la heli karaa.
7 Maps Download u offline Isticmaal
Haddii aad ku talajirto in ay tagaan meel cusub oo ka walaacsan caymiska xogta, waxaad kala soo bixi kartaa khariidado aad Windows Phone 8 offline daawashada ku salaysan qaaradda, dalka iyo gobolkaba. Tani feature nifty waxaa inta badan la illoobay. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa ay tagaan Settings> Codsiyada> Maps> Download Maps.
8 Documents Pin on Your Start Screen
Safra soo noq waa in lagu sameeyo: wareemo baas la seexdo aad, faahfaahinta kala iibsiga garoonka diyaaradaha iyo shaki ka hotel aad Start Screen si aad si fudud ku helaan iyaga karo. Waxa u gaar ah oo ku saabsan ka dusiyeen nool waa in wax kasta oo aad wareemo hawlaha sida widgets macluumaadka si aadan u baahan tahay inaad wax ka furto si aad u aragto waxa ku sugan. Waxa aad ku qori kartaa warqad on daaha si fudud u helaan.
9 Oog Work Group
Tani waa weyn haddii aad si joogto ah u baahan tahay in xiriir ay la sameeyso kooxaha darada ahaa ee asxaabteena shaqada. Iyaga Group wada, tusaale ahaan "Group Editorial", "Product X Kooxda Daahfurka", "Buddies Qadada" iwm si fudud u mar email marka loo baahdo iyaga aad awoodo fariin ama. Waxaad sidoo kale u samayn karaa qoyskaaga iyo saaxiibada kuu dhow si aad ula socon karto waxa ay yihiin ilaa warbaahinta bulshada. Si loo sameeyo kooxahan, u tag Dadka> Hel Content> Press iyo Qabo Contact> Pin inuu ku soo bilowdo.
10 Pin XIISEEYO Website
Waa caadi in aad soo booqato website-yada qaar ka mid ah dhowr jeer ka badan yihiin kuwa kale. Pin bixiyaha news ama shaqo portal jecel si aad awoodo si aad u hesho iyaga dhakhso.
11 Isticmaal Camera ay u turjum Qoraallada
Halkan waa isticmaalka kale oo weyn of camera aad Windows Phone 8 ee. Riix Search (weyneyso) icon ka dibna icon isha. Tilmaan camera aad ee mawduuca iyo 'Text Scan' ka jaftaa. Waxaa markaas waa inay awoodaan inay u tarjumaan qoraallo galay 39 luqadood. Sidee buu u weyn yahay? Just ogow in natiijada ma aha oo gebi ahaanba 100% sax ah, laakiin waxa aad ka heli doonaan in ay turjumaad ugu fiican in ay ka heli karaan. Waxaad sidoo kale u samayn karaa for Microsoft tags iyo QR Codes.
12 ugala Aqoonso Music iyo Its Artist
Si fudud u dhaqaajiso Windows Phone 8 ee la dhisay-in music function aqoonsi iyo farta telefoonka ee isha music ah. Waxaa markaas kuu sheegi doonaa magaca artist iyo magaca heesta taasoo ay hadda la ciyaaray, oo ay ku jirto meesha aad ka soo dejisan kartaa in Phone Windows ka Store. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waxaa ka jaftaa icon Search iyo guji caanka ku ah icon muusikada.
13 dhaqaajiso Voice Command
Inaad marin fiican in qaar ka mid ah hawlaha ku saabsan telefoonka - riixaan iyo hay badhanka Windows ah in la bilaabo shaqo, riix badhanka hadashaa ka dibna hadli galay aad Windows Phone 8. Waxaa jira dhowr amarrada in lagu aqoonsan nidaamka (liiska iyaga ka mid ah ka heli kartaa halkaan). Intaa waxaa dheer, in aad u yeerin karo email la habkaani.
14 dhakhso u sheeg Kooxda Waxaad Ma Marxuum Running
Marka aad heysato kulamada iyo ballamaha, ma aha oo kaliya ay galaan ay dhacdo in aad jadwalka - waxaa ka mid ah faahfaahinta xiriirka ka qayb galayaasha kale '. Habkan, haddii aadan soo daahay uu ordo, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa ka jaftaa on icon guuxa qofka in aad jadwalka. Farriin pre-qoreen pop-up doonaa in aad wax ka bedel iyo dir qayb galayaasha kale.
15 dhowraan Battery Life
Si aad u dheereeyo noloshaada batari, u tag Settings> Battery Saver. Marka screen taasi u furan yahay, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan taas oo Chine ayaa u isticmaalaya awood ugu si aad u awoodaan in ay aqoonsadaan kuwa ay yihiin dheecaan aad batteriga markii furan. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, mari xaq; taas ayaa kuu sheegi doona muddada uu socon doono iyo batari khiyaar ah si aad u bilowdo Battery Saver marka aad u yar oo ku saabsan awoodda.
> Resource > Talooyin > 15 Talooyin iyo tabaha in Dhig Windows Phone 8 More oolka ah